Dejan Lovren oo dhulka la galay Sergio Ramos, isagoo tilmaamay difaacyada ugu fiican aragtidiisa! | Bakool.net
Home / CAYAARAHA / Dejan Lovren oo dhulka la galay Sergio Ramos, isagoo tilmaamay difaacyada ugu fiican aragtidiisa!
Dejan Lovren oo dhulka la galay Sergio Ramos, isagoo tilmaamay difaacyada ugu fiican aragtidiisa!
Difaaca kooxda Liverpool ee Dejan Lovren ayaa soo doortay difaacyada ugu fiican kubadda cagta xilligan, waxaase uu aad u liiday difaaca Real Madrid ee Sergio Ramos.
Xiddigga reer Croatia ayaa soo doortay saddex difaac oo uu arko inay yihiin xiddigaha ugu wanaagsan ee difaaca ka ciyaari.
Waxa uu soo xushay xiddigga ay Liverpool ka wada tirsanyihiin ee Van Dijk, Raphael Varane oo Real Madrid u ciyaara iyo PSG Captain-keeda Thiago Silva.
Xilli uu wareysi siinayay COPA09 Lovren waxa uu yiri “Virgil ayaan dhihi karaa, maxaa yeellay waxaan soo wada qaadannay xilli ciyaareed oo aad u qurux badan, waxaan tiigsannay kama dambeysta tartanka UEFA Champions League-ga.
“Waan ka helaa Varane, waxa uu u qalmaa ammaan badan, balse ma helo inta uu helo Ramos. Taasi aniga ma raacsani, waa uu ka fiicanyahay Ramos, waxa uu ku guuleystay Champions League-ga, waxa uu ku guuleystay Koobka Adduunka, sidaas darteed, waxaa uu yahay difaaca ugu fiican dunida.
“Waxaan had iy jeer aad u tix geliyaa Thiago Silva. Xaqiiqdii aad ayuu u wanaagsanyahay, khibradna waa uu leeyahay. Aad uma joog dheerra, balse waxa uu u boodaa si sare, waana mid xoog badan”.
Xiddiggii hore ee Southampton ayaa dhulka la galay difaaca Real Madrid ee Sergio Ramos, waxaana uu ku tilmaamay mid sameeya khaladaad badan.
“Marmarka qaar, aniga uma qalmo neceyb. Haddii aad fiiriso, Ramos waxa uu sameeyaa khaladaad ka badan kuwa aan anigu sameeyo, hase ahaatee, waxa uu ku suganyahay Real Madrid.
“Haddii uu sameeyo khaladaad, waxa ay ku badinayaan 5-1, ama 5-2, qofna ma arki doono khaladaadka” ayuu hadalkiisa kusoo xiray Dejan Lovren.
29-jirkan ayaa xilli ciyaareedkan bilawgiisa ku billaabanin si wanaagsan ka dib dhaawa soo gaaray kullamadii isu diyaarinta xilli ciyaareedka, waxaana booskiisa dhaxlay xiddigga dhallinyarada ah ee Joseph Gomez.
Previous: Jurgen Klopp Oo Diyaar U Ah In Uu Anfield Kadiro Xherdan Shaqiri, Balse Shuruud.
Next: Faah faahin: Qarax Ka Dhacay Magaalada Muqdisho Sawiro